Ogaden News Agency (ONA) – Taliyihii Ciidnka Woyaanah oo Lagu Dilay Gobolka Gojam + Video.
Wararka naga soo gaadhay gobolka Axmaarada dagmada Bariga Gojam gaar ahaan magaalbada Shebel Berneta ayaa tibaaxaya in u dagaal xoogani u ku dhexmaray ciidamada Woyanaha & dableey hubaysan oo beerolay ah.
Warku wuxuuu intaas kudaray in beerolaydan oo aad u hubaysan oo xaflad qabsatay ay ciimada Woyanuhu gaadhka ka qabteen ka dibna ay weerareen, halkaas oo ay beerolaydii isdifaaceen, waxaana halkaas lagu dilay taliyhii ciidamada Woyanaha oo magaciisa la dhihi jiray Abtiyahun Asres, waxa kaloo halkaas lagu dilay askar kaloo aan wali tiradooda la ogayn.
Waxaa aagaas loo diray ciidamo badan oo ka tirsan ciidamada Woyanah si ay u xoojiyaan ciidamada agaas ka hawl gala ooy xaalada caadi ugu soo celiyaan.
Warku waxa u intaas ku daray in markii ay dawlada gumaysiga Itoobiya ciidamo soo dhoobeen ineey beerolaydii hubaysnayd ee dagaalka laga shay ciidamada Woyanaha ay ka baxsadeen magaaladaas oo intooda badani ay u galeen Jabhada hubaysan ee aagaas ka dagaalanta ee Ginbot 7 Arbanyoj.
Baryahan danbe waxaa caadi ka noqotay gobolka axmaarada ineey shacbiga & ciidamada Woyanahu si joogta ah isugu dhacaan, halkaasoo ay ka dhashaan khasaare laxaad leh.
Waxaa xusid mudan in mudo dhawr todabaad ah laga joogo u ka dhacay gobolka Gondar dagaal xoogan oo lagaga dilaya ciimada Woynaha 48 Askri in badana lagaga dhaawcay isla markaana hub & isgaadhsiin badana laga furtay ciimada Woyanaha, meesha beerlayda hubaysan lagaga dilay ilaa 16 qof.
Dadka arrimaha gobolka axmaarada u dhuun duleela ayaa arrintan ku tlimaamaya haddii ay dagaaladu sidanu sii socdaan in u wadanka ka dhici doono dagaal sokeeye oo meel walba gaadha.